Hordhaca England vs. Russia: Three Lions Oo Isha Ku Heysa Inay Soo Afjarto Abaarta 50 Sanno Oo Aysan Ku Guuleysan Koob Caalami Ah | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Hordhaca England vs. Russia: Three Lions Oo Isha Ku Heysa Inay Soo Afjarto Abaarta 50 Sanno Oo Aysan Ku Guuleysan Koob Caalami Ah
Hordhaca England vs. Russia: Three Lions Oo Isha Ku Heysa Inay Soo Afjarto Abaarta 50 Sanno Oo Aysan Ku Guuleysan Koob Caalami Ah
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 11-06-16 8:37 AM England ayaa bilaaban doonta tartankeeda Euro 2016 iyadoo kulankeeda ugu horreeya ka hor imaan doonta xulka Russia ciyaar ka dhici doonta garoonka Stade Vélodrome ee magaalada Marseille caawa oo Sabti ah. Three Lions ayaana isha ku heysa inay soo afjarto 50 sanno oo aysan ku guuleysan koob caalami ah.
Xulka dhallinyarada ah ee tababare Roy Hodgson ayaa ku jira qaab ciyaareed heer sarre ah, England ayaana ka mid ah xulalka loo saadaalinayo hanashada Koobka Qaramada Qaaradda Yurub sannadkaan.
Xulalka Kulamaya: England vs. Russia
Garoonka: Stade Vélodrome – Marseille
Garsooraha Kulankaan: Nicola Rizzoli (Italy)
Ciyaaraha Wareega 1aad Group B – Euro 2016
Three Lions ayaa si sahal ah ugu soo baxday tartankaan iyadoo rikoor boqolkiiba 100 ah uga soo gudubtay ciyaarihii isreebreebka tartankaan waxaana xusid mudan in laga dhaliyey goolashii ugu yaraa. Wixii intaas ka dambeeyey ciyaaro saaxiibnimo ah ayey ciyaareen natiijooyin isku dhafan ayeyna kala yimaadeen ciyaarahaas.
England ayaa guuldarro kala kulantay xulalka Spain iyo Holland, laakiin waxay ka adkaatay xulalka France iyo Germany. Labadii guuldarro ee kasoo gaartay Spain iyo Holland ayaana aheyd guuldarrooyinkii ugu horreeyey ee soo gaaray tan iyo markii ay xilli hore kasoo hareen Koobkii Adduunka 2014kii.
Intaas waxaa sii dheer, ciyaartooy dhallinyaro ah oo fure ah ayey sannadkaan wataan xulka England kuwaasoo wacdaro kasoo dhigay kulamada maxalliga ah ee kooxahooda, waana sababta ay taageereyaasha xulka England u filayaan inuu xulku natiijooyin wanaagsan ka keeno bandhigga France.
Dhanka kale, xulka Russia ayaa waxoogaa kasoo raynayey tan iyo markii ay raacdeeyeen tababare Fabio Capello, laakiin waa wax niyadjab leh marka aad eegto natiijooyinka kulamadoodii ugu dambeeyey. Inkastoo tababarahooda cusub Leonid Slutsky uu ka caawiyey inay si toos ah ugu soo baxaan tartankaan ka dib markii ay wadabadiyeen afartoodii kulan ee ugu dambeeyey, oo ay ku jiraan guulo ay ka gaareen Sweden iyo Montenegro. hadana Russia ma aysan badin mid ka mid ah seddaxdoodii kulan ee ugu dambeeyey ee saaxiibnimo.
Ruushka ayaa laga badiyey laba kulan halka ay barbardhac galeen kulankoodii saaxiibnimo ee ugu dambeeyey ee ay wajaheen xulka Serbia. Balse waxaa laga yaabaa inay caawiso khibradda ciyaartoydoodu, iyadoo ay xusid mudan tahay inay xataa hal guul ka caawin karto inay soo gaaraan wareegga bugbaxda maadaama ay wareegga xigga usoo bixi doonaan afarta xul ee ugu dhibcaha wanaagsan xulalka kaalinta seddaxaad ka gala safafkooda.
Daafaca dambeedka bidix ee xulka England Ryan Bertrand ayaa la filayaa inuu seego kulankaan ka dib markii uu ku guuldarreysta7y inuu kasoo bogsado dhaawac yar oo uu ku seegay kulankii saaxiibnimo ee ay wajaheen xulka Portugal Isbuucii lasoo dhaafay, Danny Rose ayaana la filayaa inuu kasii ciyaaro booska daafaca dambeedka bidix.
Inkastoo uu dhaawac jilibka ah la dhibtoonayey Isbuucii lasoo dhaafay oo dhan, daafaca Manchester United Chris Smalling ayaa la filayaa inuu kulankaan daafaca wadnaha ka garab ciyaaro Gary Cahill. Raheem Sterling ayaana la filayaa in laga doorbido geesiga Leicester City Jamie Vardy, iyadoo weerarka laba aflaha ah loo dhaafi doono kabtan Wayne Rooney iyo Harry Kane.
Dhanka kale xulka Russia, tababare Leonid Slutsky ayaa la filayaa inuu kulankaan kusoo shirtago shaxda 4-2-3-1 ah maadaama uu doonayo inay keliya ciyaaraan taatiko weeraro rogaal celis ah. Maqnaanshiyaha Alan Dzagoev, oo seegi doona madashaan oo dhan ayaa dhabarjab ku ah xulka Russia. Laakiin xaalka ayaa intaas kasii daray markii uu Talaadadii dhaawac soo gaaray Igor Denisov, taasoo haatan ka dhigan inay Russia ka jilicsan tahay qadka dhexe.
Tababare Slutsky ayaa sidoo kale si aad ah uga welwelsan qaab ciyaareedka labadiisa daafac ee wadnaha dhexe Sergey Ignashevich iyo Vasili Berezutski kuwaasoo dhaleeceyn loogu soo jeedinayey qaab ciyaareedkooda Isbuucyadii ugu dambeeyey.
England iyo Russia laba jeer ayey kulmeen haatan ka hor, waana intii lagu jiray ciyaarihii isreebreebka ee Euro 2008, iyadoo xul kasta uu hal guul gaaray markaas.
England ayaa 3-0 ku badisay ciyaartii lugtii hore ee ka dhacday Wembley Stadium 12kii bishii September 2007dii, iyadoo ka mahdineysa laba gool oo uu dhaliyey Michael Owen iyo gool kale oo ka yimid Rio Ferdinand.
Si kastaba ha ahaatee, markii ay labadaan xul isku arkeen Luzhniki Stadium caasimadda Moscow, 17kii bishii October 2007dii, Russia ayaa ka aarsatay Three Lions ka dib markii ay kasoo kabsadeen gool uu qeybtii hore ka dhaliye Rooney, waxayna ku badiyeen 2-1 xilli uu labada goolba u dhaliyey Roman Pavlyuchenko oo kulankaas bedel kusoo galay.
England (4-3-1-2): Hart – Rose, Smalling, Cahill, Walker – Dier, Wilshere, Alli – Sterling – Kane, Rooney.
Russia (4-2-3-1): Akinfeev – Kombarov, Berezutski, Ignashevich, Smolnikov – Glushakov, Ivanov – Shatov, Golovin, Kokorin – Dzyuba.